ललितपुरमा सिन्धुलीको उत्कृष्ठ प्रदर्शन, जित्ला त २ लाख? | NewsSudur
ललितपुरमा सिन्धुलीको उत्कृष्ठ प्रदर्शन, जित्ला त २ लाख?
ललितपुर महानगरपालिकाको १ सय १औं स्थापना दिवसको अवसरमा संचालन भइरहलेको महानगर कप पुरुष तथा महिला भलिबलमा सिन्धुलीका खेलाडीले उत्कृष्ठ प्रदर्शन गरेका छन् । पुष १९ देखि २५ पुससम्म हुने प्रतियोगितामा सिन्धुलीबाट कमलामाई नगरपालिकाले दुई खेलमा जित हासिल गरिसकेको छ ।
समूह ‘डी’ मा रहेको कमलामाई नगरपालिकाले लगातार जित निकालेको छ । सोमबार कमलामाईले गोदावरीलाई २५–१३, २५–१८, २५–१८ को सेटमा हरायो । चारवटा टिम रहेको यो समूहमा कमलामाईको ६ अंक छ । गोदावरी, गोकर्णेश्वर, कमलामाई र धुलिखेल यो समूहका टिमहरु हुन् । यो समूहको शिर्ष स्थानमा कमलामाई नगरपालिका रहेको छ । गोदावरी र गोकर्णेश्वरको समान ३ अंक छ भने धुलिखेलले कुनै जित पाएको छैन ।
त्यसैगरि, चौताराले भक्तपुर नगरपालिकालाई २५–१४, २५–२१, २५–२१ को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ । टोली समूह ‘ए’ बाट अन्तिम आठमा पुगेको छ । चौताराले यसअघिको खेल पनि जितेको थियो । सोही समूहबाट ४ अंक जोडेको आयोजक ललितपुर उपमहानगर पनि क्वाटरफाइनलमा पुगेको । दुवै खेलमा पराजित भक्तपुर भने बाहिरिसकेको छ । महालक्ष्मी र पनौती नगरपालिका पनि क्वाटरफाइनल पुगेका छन् । समूह ‘सी’ बाट महालक्ष्मी विजेता र पनौती उपविजेता हुँदा टोखा बाहिरिएको छ ।
प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ १३ र महिलाको ८ गरी २१ टिमको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगितामा प्रदेश ३ को महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिको टिमले लिग कम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
प्रतियोगिताको महिला र पुरुष दुवैको विजेताले २ लाख, उपविजेताले १ लाख र तेस्रोले ५० हजार पाउनेछन् । यस्तै, चौथोले २५ हजार पाउनेछ । यस्तै, महिला र पुरुष दुवैको सर्वोकृष्ट खेलाडीले १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । व्यक्तिगत विधातर्फ स्पाइकर, ब्लकर, सेटर, डिफेन्स, सर्भर र प्रशिक्षकले क्रमशः ५–५ हजार पाउनेछन् ।